Madxaweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo u ambabaxay Beledweyn.
(Mogadishu, Somalia, October.02 ,2012) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Prof. Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo goordhow ka duulay garoonka diyaaradaha Aadan Cade International Airport ayaa gaaray magaaladda Beledweyn ee xarunta Gobolka Hiiraan, waxaana booqshadda Madaxweynaha ku wehliya Xildhibaano Baarlmaanka ka tirsan.
Dadweynaha magaaladda ayaa si weyn madaxwenaha ugu soo dhoweeyey Garoonka Diyaaradaha, waxa ayna tani qayb ka tahay booqashooyin madaxweynahu uu ku bixinayo goboladda kala duwan ee dalka.
Ujeedada Madaxweynaha uu ugu ambabaxay magaaladda Beledweyn ayaa waxa ka mid ah in uu u kuurgalo xaaladda beni’aadamnimo, dhibaatooyinka fataahadda iyo roobaab u geeysteen dadka deegaanka iyo ammaanka, waxaa uuna Madaxweynuhu dadku kala soo tashan doonaa qorshahiisa siyaasadeed ee ku wajahan aayaha dalka.
Ugu dambeeytnii madaxweynuhu ayaa inta uu magaaladda ku sugan yahay waxa uu kulamo la qaadan doonaa, maamulka Gobolka, Saraakiisha Ciidamadda Dowladda iyo kuwa AMISOM, masuuliyiinta deegaanka iyo bulshadda qeybaheeda.